Magaca fayraska la tuuro ee tuubada tuubada-A1 Tilmaanta 5ml, Nooca 6ml Nooca Maaddada aan firfircoonayn Horudhaca Hawlaha Caagga ah ee loo adeegsaday ururinta muunadda, gaadiidka iyo kaydinta, iwm.
Tirada Waxyaabaha Sheega 1 Maaskaro Wajiga Wajiga 1PCS 2 Dabool Caafimaad 1PCS 3 Daboolka Jadwalka Qalabka 1PCS 4 Tuwaalka Gacanta (40 × 40cm) 4PCS 5 Gogosha Qalliinka (oo la xoojiyay) 2PCS 6 Laparoscopy Drape 1PCS 7 Duub Caafimaad Daboolka Caafimaadka 1PCS 3 Jadwalka Jadwalka Qalabka 1PCS 4 Tuwaalka Gacanta (40 × 40cm) 4PCS 5 Gogosha Qalliinka (oo la xoojiyay) 2PCS 6 Side Draw ...
1. Ikhtiyaarada cabbirka badan si loo hubiyo ku habboonaanta heerka AAMI ee saxda ah.
2. Heerarka 3 iyo gogosha AAMI Heerka 4 oo ku salaysan baakadaha midabka leh iyo midabka cusub ee buluugga ah ee boqornimada ee AAMI Heerka 3 Goonnada qalliinka ee aan la xoojin.
3. Maryaha tiknoolajiyadda sare ayaa ku qaboojiya oo qalajiya inta lagu jiro habraacyada dhaadheer.
4. Waxaa lagu heli karaa cabbirro kala duwan, dherer iyo ku habboon qaab kasta.
Daboolista madaxa waa muhiim maadaama uu madaxu ka mid yahay meelaha ugu wasakhda badan jirka oo soo saara wasakh weyn.
Tirada Waxyaabaha Shayga 1 Daboolka Jadwalka Qalabka (150 × 190cm) 1PCS 2 Midabka Isku -Darka (60 × 75cm) 6PCS 3 Lifaaqa Hawlgalka Lifaaqa (150 × 200cm) 1PCS 4 Daboolka Caafimaadka (dhexroor 48cm) 3PCS 5 Tuwaalka Gacanta (30 × 34cm) 3PCS 6 Twezers (12.5cm) 4PCS 7 Mayo Stand Cover (80 × 145cm) 1PCS 8 Maaskarada Wajiga Caafimaadka (3-ply ear loop) 3PCS 9 Goonnada Qalliinka ee La Xoojiyay (125 × 150cm) 3PCS Agab: SMS, Dhar-Bixinta SPP, Tri- SPP La ...